Paaaaaaaaaain imishini. I-Debian 7.0 Wheezy ikhishwe | Kusuka kuLinux
Yini eza nale nguqulo entsha?
* I-Apache 2.2.22 * I-Asterisk 1.8.13.1 * GIMP 2.8.2 * GNOME 3.4 * GCC 4.7.2 * Icedove 10 * Iceweasel 10 * KDE 4.8.4 * kFreeBSD kernel 8.3 no-9.0 * LibreOffice 3.5.4 * Linux 3.2 * MySQL 5.5.30 * Nagios 3.4.1 * OpenJDK 6b27 no 7u3 * Perl 5.14.2 * PHP 5.4.4 * PostgreSQL 9.1 * Python 2.7.3 kanye 3.2.3 * Samba 3.6.6 * Tomcat 6.0.35 kanye 7.0.28 * I-Xen Hypervisor 4.1.4 * Xfce 4.8 * X.Org 7.7
Futhi kulokhu kufakwa: ukwesekwa kwe-multiarch, ukusekelwa kwe-UEFI (hhayi okokuvikela okuphephile), ukufakwa nge-software yezwi yabangaboni kahle, i-ffmpeg ethathelwe indawo ngamathuluzi we-libav, ama-wheezy-backports athuthelwe ezinqolobaneni ze-debian, kufakwe i-OpenStack. Ekugcineni ngeke ibe khona inguqulo ye-HURD kulokho engikubonile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Paaaaaaaaaain imishini. I-Debian 7.0 Wheezy ikhishwe
Amazwana ayi-126, shiya okwakho
Nginanela izindaba, bengizibhale lapha kubhulogi lami emizuzwini embalwa edlule.
Umbono wakho "ungalaleleka" kakhulu uma ungawenzanga ku-Windows 😛
Kungayenza okuningi "i-echo."
Iyiphi isoftware ephelelwe yisikhathi, ngicabanga ukuthi inani elikhokhelwe ukuzinza liphezulu kakhulu, ngaphandle kokuthi sikhulume ngamaseva noma okuthile okunjalo, kepha ukulifaka kwi-pc ejwayelekile neyamanje, mhlawumbe, kumuntu odinga i-pc qiniseka ukuthi awuvaleki ngenkathi ubeka iphrojekthi enkampanini yezwe lonke haha. Ukunambitha imibala
Kepha akukho okungenakuxazululwa ngokuya ku-Testing (lokho kunciphisa iminyaka yamaphakeji kancane) By the way, is XFCE 4.10 in Testing?
Futhi isibindi kunazo zonke sizozama Esingazinzile noma Esivivinyayo !!!
Kungcono ukufaka i-ArchLinux ...
I-xfce 4.10 isesivivinyweni, kepha uyihlanganisa kusuka ku-git, ungayifaka ekuhlolweni
Siyabonga ngomlingani wolwazi. Ngicabanga ukuthuthela eXFCE noDebian.
Ungasebenzisa futhi i-mate (imfoloko ye-gnome2) ayikho kuma-repos kepha akunzima kakhulu ukuyifaka
Ngikwenzile eminyakeni eyi-2 eyedlule futhi ngijabule kakhulu.
ukuthi uzohlolwa kanjani
hlela imithombo yolwazi.uhlu bese ushintsha isondo eliya ekuhlolweni. Yize manje kufanele uqaphele ngoba amaphakheji we-sid asevele engena
Kepha uma ngingawasebenzisi amaphakheji we-sid, ngeke kube khona inkinga angithi? yize ngiyivuselele
Esontweni elilodwa noma amabili kuzoba sekuhlolweni.
Kuyenzeka futhi ukuthi izinhlelo eziningi zidinga isoftware entsha kakhulu futhi engahlolwa kahle. Ngakho-ke ngokwesibonelo ukufaka i-KDE 4.9.x noma i-4.10.x ku-wheezy, kuzofanele ngivuselele ukuncika okuningana okungazinzile kangako. Esinye isibonelo esimangazayo esikaGnome 3.8, manje kuya ngesistimu, ngakho-ke ngeke isebenze kuma-distros angasebenzisi leyo Lennart-Ware. Angazi ukuthi benze kanjani ku-Ubuntu Gnome PPA, ngicabanga ukuthi angivuseleli amamojula ancike kusistimu, noma ngokusebenza okuthile.
Angicabangi ukuthi bathembele ku-systemd, ngoba kuyi-ubuntu, futhi isasebenzisa indawo yokuqala ...
Njengoba ngishilo Ubuntu isebenzisa iGnome 3.6, i-3.8 izoba ku-ppa. Njengoba i-Ubuntu isebenzisa i-upstart, kukhona i-workaround yokwenza i-systemd njengomsebenzisi, ngoba azikho izici ezisetshenziswa yi-Gnome ezidinga amalungelo empande, okwamanje.
Noma kunjalo, i-systemd yaphakanyiswa njengokuncika kwangaphandle vele kweGnome 3.2:
Ekugcineni angikhumbuli ukuthi kwenzekeni kulokho kukhishwa, mhlawumbe bekungakhethwa, kepha namuhla kuyasetshenziswa futhi akunakwenzeka ukuhlanganisa iGnome 3.8 ngaphandle kwe-systemd.
Lo mbhalo uchaza kabanzi ngomsindo osuselwa kulolu daba:
Kungani udinga isoftware ebuyekeziwe? Noma isiphi isici esithile?
Izindaba ezimnandi. Ekugcineni ukulinda kwami ​​kuphelile futhi isikhathi seChakra kwi-laptop yami sesizophela.
Ngeke ngishintshe i-chakra ye-debian
Hhayi-ke, sengikhathele izinkinga ezithile enginazo noChakra muva nje, futhi ezingakaxazululwa. Ngaphandle kwalokho, abathuthukisi bamatasa kakhulu, ngakho-ke izinkinga engizibalulile kuzinkundla zePhakra Project aziphendulwanga (selokhu ngazishicilela kudala). Futhi kunethiwekhi angikatholi lutho. Ngiyavuma ukuthi kuDebian kwesinye isikhathi ochwepheshe kakhulu abanamusa (ngaphandle kuka-Elav, KZKG nabanye abazungeze lapha), kepha imvamisa kulula ukuthola isixazululo ngosesho olusheshayo.
Yebo, ukusuka ekukhululweni okukhiphayo kuya ku-debian kuzohluka kakhulu, ngicabanga ukuthi kuzokwenza ekuhlolweni kwe-debian.
Ku-google + kunekhasi elisebenza kakhulu elinikeza usizo ku-Chakra
Esinye isizathu sokushiya iChakra ukuthi ngihlela ukususa iWindows kukhompuyutha yami ephathekayo, futhi ngidinga i-distro ezinzile futhi eguquguqukayo ukuhlangabezana nezidingo zami, futhi ngalokho ngicabanga ukuthi iDebian ayinakubethwa.
I-Ahahaha bengifuna nokususa ukwahlukanisa ngamawindows 7 nokususa i-openSUSE yami ebisebenza ngaphandle kwezinkinga zeDebian ngeXfce (:
Kepha abantu abafaka i-debian bayayisebenzisa nesoftware njengoba iza?
Ngicabanga ukuthi i-distro yokusetshenziswa kwi-pc yasekhaya kufanele ibe nokulinganisela phakathi kwesoftware entsha nokuzinza, okungeyona i-debian.
Ngakho-ke ngichazele, kungani usebenzisa i-debian? Kungani uyisebenzisa esikhundleni senye i-distro? Ngabe ukuzinza kwe-debian kuyadingeka kangaka ngokushintshana ngamaphakeji amadala anjalo?
Ngisebenzisa i-Debian Testing. kunginika ibhalansi ephelele phakathi kokuqina nesoftware entsha. Kuyigatsha elinconyelwe umsebenzisi ojwayelekile. Igatsha elizinzile elezabasebenzisi namaseva alondolozayo amakhulu. Futhi okungazinzile okwenzelwe abasebenzisi abengesabi.
Vele ngikusike ukuthi iningi labasebenzisi bewindows, kuze kube muva nje basebenzise windows xp ... eminyakeni eyi-10 eyedlule, futhi akusikho okokuqala ngibona abasebenzisi abane-ms office 2003, vlc 1.1, gimp 2.6 nezinto ezifana naleyo xd, kanjalo isoftware yonyaka odlule, angiyiboni ihlanya xd
Bengingayiboni kanjalo, uqinisile. Futhi njengoba besho ngenhla, ibhalansi engikhulume ngayo ngokuzithoba isekuhlolweni kwe-debian, kepha uma ufuna okuthile umuntu akwaziyo ukuthi kuzosebenza kahle, nansi i-debian ezinzile.
Futhi uma ngiyibuka kusuka kuleyo ndawo yokubuka, windows 7 (okuvela ngo-2009) indala kakhulu kunale nguqulo ye-debian.
Ukungabaza kwami ​​okuningi nge-debian kuxazululiwe ngenxa yalokhu okuthunyelwe, ikakhulukazi kumazwana !!
Ukhohlwa ama-backports 😉
Sawubona @unodetantos, ungachaza kangcono ukuthi yiziphi iziteshi zokubuyela emuva?
Kuchazwe ngendlela elula, yizinhlelo zokusebenza ngohlobo olusha kakhulu kunenguqulo ezinzile ekhishwe. Njengamanje izindawo zokubuyela emuva ezivela kuSqueeze zinokusekelwa okusemthethweni kwezokuphepha okuvela eqenjini le-Debian.
Imininingwane engaphezulu ku- http://backports.debian.org/
@edo Kungani ungayi ku …… Angizithandi izimoto eziwolintshi kodwa angisho kulabo abanazo: - nkosi kungani ungayithenganga imoto yomunye umbala? -Ngizobukeka njengendawo elahlekile futhi ngibe nezimbongolo
Ngine-debian Squeeze esebenza selokhu yakhishwa kwikhompyutha engangihlala kuyo ifaka kabusha iWindows XP. Umndeni wonke uyayisebenzisa futhi ayiphindeki, ngenxa yalesi sizathu ayinalutho kuwe kepha kulabo abanezinto eziyigugu kukhompyutha yabo lokho kusinda kakhulu.
Manje uma uluhlobo oluthandekayo, zijabulise ngokudlala ne-distro yakho bese uyeka ukwephula izisekelo ... ngakho-ke ama-Debianites azi kahle ukuthi uDebian ukhuluma ngani nokubaluleka kwawo okuyisisekelo kuhlelo lwe-GNU / Linux.
ukhuluma ngekhompyutha yedeskithophu, futhi futhi iyi-PC ejwayelekile. Yini i-distro engcono ongayifaka kune-Debian stable? (oyiphendulile ekuphawuleni kwakho, yilokho ebengifuna ukukwazi). Manje njengoba ngifunde umbuzo wami, bekungafanele ngithi i-pc yasekhaya, kunalokho bengisho i-pc ngokujwayelekile. Uxolo ngalelo phutha.
Kepha uma sikhuluma ngama-laptops, ngicabanga ukuthi lokho kuyayishintsha le ndaba, ngoba ukuthuthuka kokusebenza, ekwehliseni ukusetshenziswa kwebhethri, ekusetshenzisweni kwe-SSD, ekuthuthukiseni abashayeli be-GPU bamahhala, njll., Okukhona okusha izinhlamvu, ngicabanga ukuthi kulokhu kungcono ukusebenzisa i-distro enesoftware ebuyekezwe kakhulu.
Kuyindida ukuthi ngicabanga ukuthi ukuphawula kwakho kwanelise ukungabaza kwami, kuyabongwa.
Ngikuthola kahle ngama-laptops.
Ungahlala ulanda i-kernel yamanje egatsheni lokuhlola:
Yeka ubuvila ... ngafaka iManjaro esikhundleni se-Arch ngenxa yobuvila futhi ngizohlanganisa 4.10 😛
ngiyaxolisa, impendulo eyedlule ibiku- @diazepan ngokuhlanganisa iXFCE 4.10
Ukuzinza kuyinto enama-distros ambalwa kakhulu anayo.
Bheka amadodakazi akwaDebian ukuthi azizinzile kanjani. Futhi bangamadodakazi akhe !!! XD
Uma i-Debian ingaba ukukhishwa okungahle kube yi-distro ephelele.
Okuhle ukuthi isikhathi esiphakathi kwezinguqulo side.
Ungasebenzisa Ukuhlolwa kwe-Debian noma i-Sid, ehambayo
Vele, ezinyangeni ezedlule ngaphambi kokuhlolwa kuzinzile, cishe akukho zibuyekezo, ngisho naseceleni, ngakho-ke bekungeke kube ukukhishwa okungu-100%
ESid bekuhlala kunokunyakaza okuningi, kepha kuyiqiniso ukuthi lapho kukhishwa izindlela ezizinzile ze-debian, bakhathazeke kakhulu ngokulungisa izimbungulu kunokuletha amaphakheji amasha.
Lokho kuyiqiniso, kepha ngithanda i-debian ngokwanele ukulinda lezo zinyanga.
Sawubona Edo. Ngisebenzisa iDebian ne-Opensuse ngokujwayelekile. Kepha sihlala sifaka wonke ama-distros ukwazi ukuthi ahamba kanjani, njll. I-Debian kufanele ibe nesipele ngezikhathi lapho ungahle uthinte amanye ama-Distros, ukuhlola nokuba ne-bug. Ngiyisebenzisa njengesipele. Ngicabanga, abantu abaningi bazokwenza okufanayo. Kukhona nabantu abajwayele iWindows futhi abafuna nje okuthile okuzinzile futhi okungabi yinkinga ezimpilweni zabo. Okuyiqiniso ukuthi uma uthanda isoftware yamahhala, into yokugcina okufanele ube nayo yiDebian kuphela, ngoba ungemuva ngaso sonke isikhathi.
I-Well Debian Wheezy ayiphuzile kangako .. Akuyona eyokugcina kepha cishe futhi njalo ungafaka kusuka kuzindawo zokubuyela emuva noma ulande uhlelo ekhasini lalo elisemthethweni elihlanganisiwe ngefomethi ye-.deb noma ufake kusuka emthonjeni ..
Ungakwenza lokho ngonyaka wokuqala, bese izinhlelo ziqala ukuncika ekuncikeni okuthathwa ubuntu ku-sid xDD ...
Angazi ukuthi mangaki ama-debianite akhona lapha, bengisebenzisa i-debian cishe iminyaka eyi-2 manje futhi kungokokuqala ukuthi ngiye ??? ngivuselele noma ngenze ukufakwa okuhlanzekile kusuka ekuqaleni ??? wena ongincomayo.
ngama-95% kuphela alabo abavakashela leli khasi…. 😛
Angiyisebenzisi futhi kufanele i-20% xdddd
kufanele udle ukudla okunempilo
Uma uhlukanise ukwahlukaniswa ngincoma ukuthi ukufomathi ukufaka kuphela impande
Uma usebenzisa amakhosombe ajwayelekile e-Debian, ngeke ube nankinga yokubuyekeza phakathi kwezinguqulo. Bengikwenza lokhu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi futhi ngaphandle kwezinkinga (nakuTesting). Uma unendawo ethile "exakile", yiphawule ohlwini lwemithombo.list ngaphambi kokwenza ukuvuselelwa kokutholwa futhi yilokho kuphela. Ngemuva kokubuyekeza ungazama ukubona ukuthi kwenzekani uma ungayikhipha ku-inthanethi futhi yilokho kuphela. Inhlanhla !!
Bengihlala ngivuna ukufakwa okuhlanzekile, kepha ungabuyekeza ngaphandle kokwesaba uma ungakahlanganisi amaphakheji .. Isibonelo: uma usebenzise Ubuntu PPA noma amaphakheji avela egatsheni lokuhlola noma elingazinzile .. Uma uhlala egatsheni elizinzile ayikho inkinga.
Ngisanda kuthutha-ngiphinde ngaya ku- Kubuntu 12.04. Umama wami, yini ihlaya xD
Konje. Namuhla i-KDE version 4.10 ye-Windows iphumile. Kuhamba kahle kakhulu D:
inguqulo, distroshop LALALALALALAA
Ngifunda ngenqubo yokuvuselela kusuka ku- "cindezela", kungokokuqala ukuthi ngivuselele.
yingakho ngibuze omakadebona abadala asebeneminyaka eminingi besedlula mina ukuthi kungangcono yini ukubuyekeza noma ukufaka okuhlanzekile kusuka ekuqaleni. (nokuthi yiziphi izinkomba, ngaphandle kwe / ekhaya kungabaluleka ukwenza ikhophi yokusekelayo
ngiyabonga ngosizo onganginika lona.
Ngingancoma ukwenza ukufakwa okuhlanzekile, kusukela ekuqaleni futhi ukwenza isipele kuphela / ikhaya, akukho okungcono kunephunga elisha = P
Ubusuku obuhle-ezweni lami-.
Inguquko phakathi kwenguquko ye-Squeeze nenguqulo ye-Wheezy iyashelela ngokubuyekeza ngenethiwekhi, i-CD, i-USB… engikwaziyo. Bekufanele ngikwenze izikhathi ezimbalwa ngoba ngiwumsebenzisi wenguqulo yecala futhi ayinginikanga inkinga. Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi ukufaka kusuka ekuqaleni akukubi, ngaphandle kokuthi ufake okuningi lapho kungenzeki ukuthi isibuyekezo singalimazi, uma kungenjalo, funa i-CD / DVD bese uqala ukuyifaka kusuka ekuqaleni.
Futhi bengicabanga ukuhlala ku-Debian GNU / Linux isikhashana, bese ngishintshela ku-Debian GNU / HURD futhi ekugcineni, manje sengizinzile, mhlawumbe ngizama i-Debian / KfreeBSD.
Ngabe kukhona owaziyo ukuthi amaphakheji we-KDE 4.10 asevele etholakala ku-Testing? Siyakuhalalisela ithimba lezentuthuko le-Debian. 😀
Damn, linda ke. Angazi ukuthi kungani ngesaba i-xD repo yokulinga
Manje i-kde 4.10 ayizinzile kakhulu, ngithande okungaphezulu kwe-4.9.5, kepha kuyinto enhle nge-debian, ibeka kuphela izibuyekezo ezizinzile kakhulu, ngisho nokuhlolwa 😀
I-PS: Ngivivinye i-kde 4.10 ku-openSUSE tumbleweed naseGentoo, banemininingwane eminingi abazoyipholisha.
Ngiyalingwa ukufaka iDebian, iyangidonsa (futhi ngiyayithanda i-logo yayo) kepha noma nini lapho ngiyifaka kunokuthile okungivimbela ukuthi ngiyishiye njengohlelo oluyinhloko.
Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi lapho sengikhathele iXubuntu ne-Arch.
Futhi iyini imvelo ezenzakalelayo? ekugcineni i-GNOME?
Bengivele ngidlula nje: ngakho-ke uma bengingathandi iDebian 7 ukuthi inetafula 8, kubi kakhulu ngabe babeke itafula 9 kuyo, ngoba ngenkathi ngiseseceleni futhi akukho okusha kuze kube manje, elav ungacabangi ukuthi ngishiye i-fedora njengoba senginethanga manje uma ngingenza izivivinyo zami ngaphandle kokubona: p ngenkathi ngilinde i-fedora 19 ne-RHEL 7.
Ngibheke phambili nakuCentOS 7 :). Ngokubambisana noDebian Wheezy bazokwenza umsebenzi omuhle 😀
Ngizamile inguqulo ye-KDE kwi-laptop yakudala- (32bits) futhi isebenza kahle, naku-NAS- (NSLU2) yami ngaphandle kwenkinga yokubuyekeza kusuka ekukhipheni.
Ngiyayihlola emshinini obonakalayo futhi iyashesha kakhulu
Othile udlulisa imithombo.hlu lwe-Wheezy. Ngidinga i-multimedia, ukuphepha, njll. Kusukela vele ngiyabonga kakhulu.
i-deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main
i-deb http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy main
i-deb http://security.debian.org/ Wheezy / updates main
i-deb http://ftp.us.debian.org/debian/ izibuyekezo ze-wheezy main
i-deb http://ftp.mx.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
i-deb-src http://ftp.mx.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
i-deb http://security.debian.org/ khama / uvuselele okuyinhloko okufaka isandla ngaphandle kwamahhala
i-deb-src http://security.debian.org/ khama / uvuselele okuyinhloko okufaka isandla ngaphandle kwamahhala
i-deb http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main okungeyona mahhala
i-deb-src http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main okungeyona mahhala
Yehlulekile kimi. Shintsha ukukhama ku-wheezy kumakhosombe okuphepha xD
Sibonga kakhulu kuDiazepan noRuffus ngokuphendula.
UDebian Wheezy ukhishwe !! 😀
Ngisakhumbula lapho ukuphuma kwe-Ubuntu kudale omkhulu umsindo, futhi kulokhu cha, kunamanothi amaningi nge-deboian kune-Ubuntu, yiziphi izinto.
Idala amanothi amaningi ikakhulu ngoba iphuma kanye njalo eminyakeni emi-2
Umuntu, ukuthi kufanele bonge kanye kanye eminyakeni emibili noma emithathu, manje angazi, Ubuntu buphuma njalo ezinyangeni eziyisithupha futhi kuhlale kuyikhohlisa xd efanayo
Ngalokho ngivumelana nawe, ngoba manje sengingasebenzisa iChromium 26 futhi ngikwazi futhi ukufaka iZPanelX.
I-Zpanel yiyona enhle kunazo zonke .. Isondelene kakhulu neCpanel futhi futhi imahhala .. Ihloniphekile 🙂
Ngolunye lwalezi zinsuku ngizokwenza okokufundisa ukuthi ungayifaka kanjani iZPanel X kuDebian Wheezy, ngoba ekugcineni izinhlelo ezinjenge-Apache kanye / noma i-MySQL zisezincwadini ezinconywe ngabathuthukisi (ngaphezu kwalokho, ngayihlola ngohlobo lwayo lweWindows kufakwe isitaki futhi kulula kakhulu ukusiphatha).
I-Deboian inguqulo enginayo ethangeni lami, hahahahahaha
Bengifuna ukubeka i-debian, hahahaha
Yize nganginoSid ngangizizwa ngizinzile. Kuyinto enhle nge-debian, yize izinqubomgomo zayo zeqise kakhulu, njengokuzinza kokwakhiwa kwawo "konke". Kuphela kuze kube manje lapho kuzinzile ngempela.
futhi lapho amaphakheji amasha kufanele angene, kungani i-sid okwamanje ingabukeki njenge-sid: p
manje aqala ukuza. Qaphela
Ngiyabonga! noma ngabe imininingwane yayivele ihambile kakhulu: p manje uma ngingasho lokho ukube bekuyi-sid: p
Ngabe i-newbie (njengami) ingafaka futhi isebenzise iDebian?
Kuthiwani uma bekune-xfce lapho bekufanele ngiye khona ukuyithola?
Ngingakwazi yini ukufaka izinhlelo ezifanayo ku-xubuntu yami?
Uma uthanda ukufunda nokuchitha isikhathi esincane kuyo, noma i-newbie ingasebenzisa iDebian ngokuphelele.
umbuzo, ungayifaka kanjani i-XFCE 4.10 ku-Testing? Uma ngingenayo i-4.8 ngingakhuthazwa ukuthi ngizame
Siyabonga ngamathiphu !!
1) I-newbie evela ku-Ubuntu? Vele angakwazi. Ufunda ezinye izinto ezimbalwa endleleni.
2) iya lapha
Ukhetha ukwakhiwa (i386 ngamabhithi angama-32, amd64 ngamabhithi angama-64), bese kuba yi-iso-cd, bese ulanda i-cd nge-xfce
3) Ngitshele ukuthi yiziphi izinhlelo futhi ngizokutshela uma ukwazi
Nayi incwadi yakho entsha yokuqasha
Kuyacaca ukuthi ngifuna ukushintshela ku-Debian XFCE ye:
2º sebenzisa izinhlelo engizisebenzisa ku-xubuntu yami (izinhlelo ezijwayelekile angizenzi izinto zibe nzima, ngithi ngiyazihlanganisa)
Ngizolinda isikhashana futhi lapho ngizizwa ngikhuthazekile, noma lapho i-xubuntu iyeka ukusebenza futhi, NGIYANGISHINTSHA!
Uma i-xubuntu noma i-distro oyisebenzisayo ikufanela, asikho isizathu sokushintsha, ngeke uzuze lutho, noma ulahlekelwe yilutho.
Yebo, kwakumayelana nesikhathi lapho iphuma khona, isha futhi ishesha njengokujwayelekile !!
Uma ngingenazo izinkinga ngokuxhumeka okungenantambo, bengizoshintshela ngokuphelele ku-Debian, inqobo nje uma ngizoqhubeka nokuyisebenzisela i-xD yesikole
Izolo ebusuku ngilande i-Linux Mint, ngiyaqhubeka nale nguqulo ye-Debian namuhla, kuzoba okokuqala ngiyisebenzisa, ake sibone….
Ngiyakuqinisekisa ukuthi le nguqulo ye-Debian ngeke ikudumaze ...
Siyakuhalalisela ngale distro enhle kakhulu ye-XD
Nginombuzo, uzotholakala nini uDebian Jessi? ngamanye amagama, isivivinyo esisha.
Kungakapheli izinyanga eziyisithupha kuya ngaphezulu. Angikwazanga ukukutshela.
[zonke izinto] LANDA I-DVD1! [/ zonke izinto]
Umbuzo owodwa: Ingabe ama-repo wokuhlola manje angangezwa kule nguqulo entsha ye-Debian Stable?
Usho ukuthini? Udinga ukukhomba uhlu lwakho lwemithombo kuphela kokuhlola. Ngokwesibonelo:
i-deb http://ftp.mx.debian.org/debian okuyinhloko kokunikelwayo okungekho mahhala
Angesabi ukudlula ukuhlolwa. Nami angiyidingi. Kepha ngokuzama awulahlekelwa yilutho.
Siyabonga ngolwazi. Ngaphezu kwalokho, lapho ngizama ukufaka ama-repos wokuhlola ku-Debian Squeeze kuzohlala kucela ukhiye womphakathi nezinto ezinjalo.
Ukufakwa kwe-debian bekulula kakhulu kulokhu ngihlela ukuhlala esitebeleni (:
Angizange ngizisole ngakusasa ngibuyele ku-openuse
Kuhle! Manje sekuyisikhathi sokushintsha uhlu lwemithombo luye Ekuhlolweni bese uqhubeka nokujabulela!
Noma ubani uyazi ukuthi kwenzekani kuHurd? Bekufanele kube nohlobo olungekho emthethweni noWheezy. Kepha angiboni isixhumanisi sokulanda. Ngabe kukhona owaziyo okuthile?
Njengamanje ngisebenzisa inguqulo ye-Squeeze nge-lxde yangokwezifiso; Ngikutholile kulula kakhulu, kulula futhi ngifunde okuningi.
Ngivela kubuntu, okwakungcono kakhulu kimi, kwaze kwavela ubumbano ngoba i-gnome yashintsha ifilosofi yayo futhi ngazizwa ngilahlekile.
Ngokwalokho ebengikwazi ukukuqonda, abanye abantu bathanda ukuba nezinhlelo zakamuva ezinhlelweni (amaphakheji), kanti abanye bathanda lokho osekuhloliwe futhi kusebenza ngobungozi obuncane bokuhluleka.
Abantu abathanda ukuthola okwakamuva bayadingeka ngoba ngenxa yabo, lokho kwehluleka kumaphakeji kungalungiswa, ukuze okuyingozi okuncane kakhulu ukujabulele futhi kuqede ukuletha uzinzo kubo.
Ekugcineni sonke sijabulela umhlaba we-linux, umhlaba we-Debian.
Izolo ebusuku ngizamile ukufaka i-Debian 7 plus Xfce, kepha esinyathelweni sokufaka izinhlelo, kuphume isikrini esibomvu singazisa ukuthi le nqubo yehlulekile, phambilini ngenze iso, le nkinga efanayo ibivele kimi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lapho ulanda ukuhlolwa kwenguqulo Ngabe kukhona onenkinga efanayo?
Ngafaka inguqulo ye-rc3 ye-Wheezy xfce ngaphandle kwenkinga.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi i-rc3 inguqulo yokugcina?
noma ngabe inguqulo yokugcina, efana nokuvuselelwa kokutholwa, ilungisiwe.
Ukuvivinywa kusuka bukhoma futhi njengamanje njengosilika, bengiyesaba i-adaptha yenethiwekhi engenantambo kepha nezinkinga zero ngalokho nakho.
Qaphela ukuthi ungabi uhlelo lwami oluzenzakalelayo, ngijabule kakhulu okwamanje!
Kuhle, ngiyifakile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nge-xfce futhi isebenza ezinweleni, ngasendleleni, i-hoot emayelana ne- "multiarch", ukwakhiwa kwami ​​kungu-amd64, futhi ngokwesibonelo i-skype 4.1 isesakhiweni se-i386 kuphela, ngakho-ke nje bekufanele ngikwenze yenza:
"I-Dpkg -add-architecture i386"
kanye ne: "apt-get update"
Ngemuva kwalokho bengingayifaka nge-gdebi ngaphandle kwezinkinga, ngihalalisela lonke iqembu le-Debian, benza umsebenzi omuhle.
I-HD Magazine # 6 iyatholakala